MLM အကြောင်းကို သေသေချာချာလေး ရေးပြထားတဲ့ ဆောင်းပါးအတွဲကောင်းလေးတွေ ( 1 to 8 ) ပါ ။ ~ Myanmar Anti Mlm Group
MLM အကြောင်းကို သေသေချာချာလေး ရေးပြထားတဲ့ ဆောင်းပါးအတွဲကောင်းလေးတွေ ( 1 to 8 ) ပါ ။
4:07 PM Taste It Myanmar
MLM အကြောင်းကို သေသေချာချာလေး ရေးပြထားတဲ့
ဆောင်းပါးအတွဲကောင်းလေးတွေ ( 1 to 8 ) ပါ ။
ရှည်လွန်းလို့ တစ်ခါတည်းနဲ့ ဖတ်လို့တော့ ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး ။
မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အနေနဲ့ တင်ပေးထားတာပါ ။
အေးအေးဆေးဆေး အချိန်ယူပြီး ဖတ်နိုင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ ။
ကျွန်တော် ( ကိုဇင်ဇေ ) ရေးတာ မဟုတ်ပါ ။
" ကိုသက် " ဆိုသူ ရေးထားတာလို့ သိရပါတယ် ။
ဒီ Site ကနေ ရတာပါ ။
( http://neonapster32.blogspot.com )
တိုက်ရိုက်သွားဖတ်ရင် ပုံတွေ ၊ တွေနဲ့ သေချာ ဖော်ပြထားတာမို့
ပိုပြီး ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ် ။
ရှည်လို့ မှာ တိုက်ရိုက် တင်မရလို့
အတွဲ ၂ နဲ့ ၃ ကိုပဲ အမြည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ။
ကျန်တဲ့ အတွဲတွေကို အောက်မှာ links တွေ ပေးထားပါတယ် ။
ပြောရင်း ရောင်းရင်း Marketing (MLM) အပိုင်း (၂)
ဈေးရောင်းတယ်ဆိုရာမှာ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ရောင်းချခြင်း (Good sale) နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ရောင်းချခြင်း (Service sale) ဆိုတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ MLM စနစ်ကို ဒီနှစ်မျိုးစလုံး ရောင်းချရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
Multi Level Marketing ကို ဈေးကွက်အတွင်း တိုက်ရိုက်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း (Direct Selling Method) လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ရောင်းချရာမှာ ကုမ္ပဏီက လစာနဲ့ ခန့်ထားတာ မဟုတ်တဲ့ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ နောက်ထပ် အရောင်းကိုယ်စားလှယ် အသစ်တွေကို ထပ်မံဆွဲဆာင် စည်းရုံးရပါတယ်။ ကိုယ်က ထပ်မံစည်းရုံးလိုက်လို့ ကိုယ့်နာမည်အောက်မှာ ကိုယ်စားလှယ်အသစ်တွေ ထပ်ရလာလေလေ ကိုယ့်မှာလည်း ဝင်ငွေတိုးလေလေပါပဲ။ ကိုယ်အပါအဝင် ကိုယ့်အောက်က ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ရောင်းချရတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းပမာဏပေါ် မူတည်ပြီး ကော်မရှင်ခကို အချိုးကျ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အောက်မှာ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေ များများရအောင် စည်းရုံးနိုင်လေလေ ဝင်ငွေတိုးလေလေလို့ ယေဘူယျသတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါကတော့ သာမာန် MLM စနစ် တစ်ခုရဲ့ အခြေခံသဘောတရားပါ။
ပထမဦးဆုံး MLM စနစ်နဲ့ ရောင်းချခြင်းကို ၁၉၄၅-ခုနှစ်မှာ California Vitamin Company ကနေ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ marketing စနစ်မှာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူ (distributors) တွေဟာ ပုံမှန်ဖေါက်သည် ၂၅ ဦးစီ ရှာရပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် အဲဒီ ၂၅ ဦးကို ပုံမှန်ရောင်းရငွေထဲက ၃ ရာခိုင်နှုန်းကို ကော်မရှင်အဖြစ် ရပါတယ်။ အဲဒီကနေ တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့ ဆင့်ပွားပြီး ပြုပြင်လာလိုက်ကြတာ ဒီနေ့အချိန်အခါမှာတော့ MLM ဟာ နိုင်ငံတကာမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးချနေတဲ့ ဈေးကွက်ထိုးဖေါက်နည်းစနစ်တစ်ခု ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
Multi Level Marketing သမားတွေရဲ့ လက်သုံးစကားက မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတဲ့ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း (Opportunity) တစ်ခု ပြောပြချင်လို့….. ဆိုတာမျိုးပါ။ အိုးမကွာ အိမ်မကွာ အလုပ်မပျက် ကျောင်းမပျက် ပိုက်ဆံရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းမျိုး မလိုချင်ဘူးလား… ဆိုတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် တစ်နေရာရာမှာ ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလောက်ဆို သူတို့လမ်းကြောင်းထဲကို ဆင်းမိဖို့ အတော်လုံလောက်သွားပါပြီ။ အရေးကြီးတဲ့ အဓိကအချက်တွေကို ဖွက်ထားပြီး သိပ်အရေးမပါတဲ့ အချက်တွေကို အဓိကပုံစံမျိုးနဲ့ ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုက သူတို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာပါပဲ။
ဒီ Marketing စနစ်ရဲ့ အဓိကပြဿနာ ၄ ခုကို ပြောပြပါ့မယ်။ နံပါတ် (၁) ပြဿနာက ဈေးကွက်ရှာတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာ (Market Saturation)၊ နံပါတ် (၂) က ပိရမစ်ဖွဲ့စည်းပုံ ပြဿနာ (Pyramit Structure)၊ နံပါတ် (၃) က အကျင့်သိက္ခာပိုင်း ပြဿနာ (Morality and Ethics) ပါ။ Accountability လို့ ခေါ်တဲ့ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှု ဆိုတဲ့ အပိုင်းဟာ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ပါ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေပါတယ်။ နောက်ဆုံးနံပါတ် (၄) အချက်က မိတ်ဆွေဖြစ်မှုကို အသုံးချတဲ့ ပြဿနာပါ။ Relationship Issues လို့ ပြောနိုင်မယ်ထင်ရဲ့။
ကျွန်တော့်ရဲ့ MLM အပေါ် ဘဝင်မကျခြင်း ကိစ္စတွေမှာ အဲဒီနောက်ဆုံး နှစ်ချက်က အဆိုးဆုံးပါပဲ။ တစ်ချက်ချင်းကို ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်၊ မြင်မိသလောက် ရှင်းပြပါ့မယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်းရဲ့ အမြင်မဟုတ်ဘဲ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဆွေးနွေးကြရင်း ထွက်လာတဲ့ အမြင်တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးကွက်ရှာမှု ပြဿနာဆိုရာမှာ တစ်ဖက်လူကို ဆွဲဆောင်တဲ့ပြဿနာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကျုံးသွင်းခြင်းလို့ နာမည်တပ်ရင် ရင့်သီးသွားမလားတော့ မသိပါဘူး။ ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆို စားသုံးသူကို ဆွဲဆောင်ရတာ ထုံးစံပါ။ ဆွဲဆောင်ပုံ၊ ဆွဲဆောင်နည်း အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ Media မှာ ကြော်ငြာမယ်၊ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်မယ်…. စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ Multi Level Marketing ရဲ့ စားသုံးသူ ဆွဲဆောင်ပုံက အငြင်းပွားစရာတွေ များလှပါတယ်။ အဓိကပြဿနာက ဆွေးနွေးပြီး marketing လုပ်တဲ့နေရာမှာပါ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆွေးနွေးခြင်းက Multi Level Marketing ရဲ့ အဓိကမဟာဗျူဟာဖြစ်သလို အဓိကမဟာပြဿနာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သဘောကိုက လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ပြောဆိုဆွေးနွေးပြီး ဆင့်ပွားသွားတဲ့ စနစ်ပါ။ ဒါဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံမှန်အတွေးအခေါ်နဲ့ အလိုအလျှောက်သိတဲ့ အသိတွေ၊ ဆင်ခြင်တုံ့တရားတွေကို တုံ့ဆိုင်းသွားစေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ငွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့ ရနိုင်မယ် ဆိုတဲ့အသိ ဝင်သွားအောင် လုပ်လိုက်လို့ပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ ကနဦးဆွေးနွေးပွဲတွေကို သတ္တုချလိုက်ရင် ငွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့ ရနိုင်မယ်…ဒါပေမဲ့ အခုတော့ မဟုတ်သေးဘူး…. ဆိုတာကို တွေ့ရပါမယ်။
MLM သမားတွေရဲ့ ပြောနေကျ နောက်တစ်ခုကတော့ သူတို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ MLM စနစ်ဟာ သူများနဲ့မတူ အသစ်ဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီစနစ်ကိုသုံးရသလဲလို့ မေးကြည့်ပါ။ ကြော်ငြာစားရိတ်သုံးရင် အပိုကုန်ပြီး စားသုံးသူတွေ အကျိုးမရှိလို့ ကြော်ငြာအတွက် အသုံးပြုမဲ့ ကုန်ကျစားရိတ်ကို အခုလို marketing သမားတွေ အတွက်ဖန်တီးပေးတာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း (များသောအားဖြင့် ဒီအဆင့်ကို တန်းပြောလေ့မရှိပါ)၊ ကြော်ငြာဖိုးမကုန်လို့ ပစ္စည်းအရည်အသွေးကို အလေးထားနိုင်ကြောင်း ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ အခြား အကြောင်းပြချက်တွေလည်း အများကြီး ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
အဲဒီမှာမှ မြန်မာအချင်းချင်းဆိုရင် လူသတင်းလူချင်းဆောင်တဲ့ နည်းလို့တောင် ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ ပြောနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ အမျိုးတူအခြားကုန်ပစ္စည်းတွေထက် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် အမြဲဈေးကြီးနေတတ်တာကို တွေ့ရပါမယ်။ ဈေးသက်သာတဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးအမည်တချို့ ပါကောင်းပါ ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ဖောက်သည်တချို့ကို ဆွဲဆောင်ဖို့ ဖြစ်ပြီး ကျန်တာတွေကတော့ ဈေးကြီးတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြောစရာတစ်ခုကတော့ ပစ္စည်းတချို့ဟာ ပုံမှန်နည်းလမ်းတွေနဲ့ ရောင်းချဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပြီး မအောင်မြင်တဲ့အခါ ဒီနည်းကို သုံးတတ်ပါသေးတယ်။
ဈေးကွက်ကို နည်းစနစ်အသစ်နဲ့ ထိုးဖေါက်ရောင်းချခြင်းဟာ ကမ္ဘာမှာ မထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သလို အောင်မြင်သွားတဲ့ နည်းစနစ်အသစ်တွေလည်း ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာ အထင်အရှား ရှိပါတယ်။ အင်နဲ့အားနဲ့ ထိုးဖေါက်ပြီး ရောင်းချနိုင်သလို အကျိုးအမြတ်လည်းကြီးတဲ့ marketing စနစ်တွေဟာ လေ့လာရင် လေ့လာနိုင်သလောက် ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ Marketing စနစ်ကောင်းရင် ကောင်းသလောက် ရှယ်ယာရှင်တွေ၊ အလုပ်သမားတွေ၊ ရောင်းချသူတွေနဲ့ စားသုံးသူတွေကို အကျိုးရှိစေပါတယ်။
MLM စနစ်တစ်ခုကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ မောင်းနှင်သလဲဆိုတာလေးကို သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ အများအားဖြင့် High-level MLM promoters တွေဟာ အနားယူသွားကြပြီ ဆိုတာကို တွေ့ရပါမယ်။ အဲဒီလူတွေ အနားယူ၊ အပန်းဖြေ၊ ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ ပုံတွေကိုလည်း အားကျစရာ ပြောကြ၊ ပြကြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အားကျခဲ့ဖူးတာပေါ့။ MLM စနစ်မှာ မတည်ငြိမ်တဲ့သဘော၊ မရေရာတဲ့ သဘောတွေ၊ အားနည်းချက်တွေက နည်းနည်းလောက် ဂရုစိုက်ကြည့်ရင်ကို သိသိသာသာကြီး ရှိနေတာ တွေ့ရပါမယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေကို မမြင်ရအောင်၊ မရိပ်မိအောင် ဒါမှမဟုတ် သိပ်အရေးမကြီးဘူးလို့ ထင်ရအောင် လုပ်တဲ့ မဟာဗျူဟာတွေဟာ အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုး၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ မရိုးရအောင် ရှိပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူရဲ့ သဘာဝအရ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အားသာချက်ကို လူသိများအောင် လုပ်မယ်… အားနည်းချက်ကို သတိမပြုမိအောင် လုပ်မယ် ဆိုတာ သဘာဝကျတဲ့ ကိစ္စပါ။ ခြောက်ပစ်ကင်း သဲလဲစင်တဲ့ ပြည့်စုံမှုမျိုးကတော့ လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်… ဘယ်ဟာမှ မရှိနိုင်ပါဘူး။ အကျိုးနဲ့ အပြစ် ဘယ်ဒင်းက သာတယ် ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပြီး လက်ခံနိုင်ရင် ပြီးတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အကျိုးအပြစ်ကို တွက်ချက်တဲ့ နေရာမှာ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အယူအဆ မတူညီနိုင်ပါဘူး။
အဲဒီလိုပြောရင် ဘယ်စနစ်ကရော ပြီးပြည့်စုံနေလို့လဲ… သေချာနေလို့လဲ…. စီးပွားရေးလုပ်ရင် မသေချာ မရေရာတာတွေနဲ့ ရှောင်လို့မှ မရဘဲ…. လို့ စာဖတ်ရင်း စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်ပြီး စောဒကတက်နေတဲ့ ဆရာတွေကို တစ်ခုလေးတော့ ပြောချင်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ရဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်…. ဆိုတဲ့ ခံယူချက်မျိုးရှိရင် ဆက်ဖတ်ဖို့ မလိုသလို ခေါင်းစားခံစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ အပြစ်ပြောတာ မဟုတ်ပေမဲ့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ တာဝန်ခံမှု ဆိုတာကို စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်တစ်ခုတည်း မကြည့်ဘဲ ဘာတွေ ပြန်ပြီး ပေးဆပ်လိုက်ရတယ် ဆိုတာကို နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် တွေးကြည့်သင့်တယ် ထင်လို့ပါခင်ဗျား....
(အပိုင်း (၃) မှာ ဈေးကွက်ရှာမှု ပြဿနာနမူနာ တချို့နဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုတစ်လေကို ဝေမျှဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ ဒီလထဲမှာ လုပ်စရာတွေ များနေလို့ အဆက်မပြတ်ရုံလေး ရေးလိုက်ရပါကြောင်း....)
(သရုပ်ဖေါ်ပုံများကို Google မှ ယူသည်။)
ပြောရင်း ရောင်းရင်း Marketing (MLM) အပိုင်း (၃)
အပိုင်း (၁) မှာ စကားနဲ့ လက်ဆင့်ကမ်းတာရဲ့ ပြဿနာတချို့ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ အပိုင်း (၂) မှာတော့ MLM ရဲ့ အစ ကနဦးအကြောင်းနဲ့ ဈေးကွက်ရှာပုံ ပြဿနာကို အနည်းအကျဉ်းသဘော တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
အခုလည်း ဒီဈေးကွက်ရှာပုံကိုပဲ နည်းနည်းလောက် ဆက်ပြီး မြင်သလိုပြောကြည့်ပါ့မယ်။ ဒီကိစ္စက အဓိက ပြဿနာထဲမှာ ပါသမို့ အကုန်မရေးနိုင်ပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ရေးလိုက်တာပါ။
လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး စကားလက်ဆင့်ကမ်းတယ် ဆိုရာမှာ အပိုင်း (၁) မှာ ပြောခဲ့သလို နားလည်မှု လွဲမှားနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ လူဆိုတာ စကားတစ်ခုကို လက်ဆင့်ကမ်းရာမှာ ပုံမှန်နားကြားလွဲတာ၊ နားလည်မှုလွဲတာ အပြင် ကြည်ညိုသဒ္ဒါကြောင့်ပဲ ဖြစ်စေ၊ အမုန်းစိတ်အခံ ရှိရင်ဖြစ်စေ၊ လောဘကြောင့် ဖြစ်စေ၊ ဒေါသကြောင့် ဖြစ်စေ၊ နှစ်သက်မှု၊ မနှစ်သက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်စေ လိုရင်လိုသလို မလိုရင်မလိုသလို စကားကို လိုတိုးပိုလျော့ ပြောတတ်တာ ဓမ္မတာပါ။ ဒါတောင် ဘာသာစကား တူမှပါ။ ဘာသာစကားမတူသူဆီက ကြားရတဲ့စကားဆိုရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲ မရှင်းတဲ့အချက် သူတစ်ပါးကို ပြန်ပြောတဲ့အခါ ကိုယ်ထင်သလို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန် ပြောတတ်ကြပါသေးတယ်။
MLM player တွေဟာ စီးပွားရေးလုပ်တာဖြစ်လို့ လောဘလေးတွေ ကိုယ်စီရှိနေမယ်ဆိုတာ ဗေဒင်မေးစရာ မလိုတဲ့ ကိစ္စပါ။ သဘာဝလည်း ကျပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ စကားလက်ဆင့်ကမ်းရာမှာ အပိုအလိုလေးတွေနဲ့ ဝေဝေဆာဆာလေး ပြောတတ်ဖို့ အဓိကကျတဲ့ အချက်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကို စီးပွားရေးလို့ အတိအလင်းမြင်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လုပ်ရင်လည်း တစ်မျိုးအားဖြင့် ကောင်းမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ MLM သမားတွေရဲ့ စည်းရုံးပုံ မဟာဗျူဟာတွေက အင်မတန် နိုင်ငံရေးဆန်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ လူတွေကို ကူညီနေတာဆိုတဲ့ ပရဟိတဆန်ဆန် စကားလုံးမျိုးကို သူတို့အားလုံးနီးပါး သုံးတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တကယ်ကို ရယ်ချင်သလို စိတ်ထဲလည်း မကောင်းသလို ခံစားရပါတယ်။ MLM ကို ပရဟိတအလုပ်အဖြစ် လက်ခံဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက် အတော်ကသိကအောက် ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်လာမဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ပရဟိတဆိုတာ MLM လိုမျိုးလို့ ဥပမာပေး ညွှန်ပြရမယ်ဆိုရင် နားလည်မှုတွေ လွဲကုန်တော့မှာပါပဲ။ ကိုယ်ကျိုးမဖက် အများအတွက် ပရဟိတစစ်စစ် လုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ မျက်နှာတွေကို ဘယ်လိုကြည့်ပြီး ပြောရမှာပါလဲ။ သူတို့ကိုတော့ ကျွန်တော်အပြစ် မမြင်ရက်ပါ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ founder တွေက ချထားပေးတဲ့ guide line အတိုင်းသွားရင်း သူတို့ကိုယ်သူတို့ တကယ်ကြီးကို အဲဒီအတိုင်း အများအကျိုးအတွက် လုပ်နေတာ ဆိုတာမျိုး ယုံကြည်နေကြလို့ ပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ ပရဟိတဆိုတဲ့ ပါဠိစကားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်ကို အငြင်းပွားလိုရင်း မဟုတ်တဲ့အတွက် လူအများနားလည်သလို အများအကျိုးအတွက် ကိုယ်ကျိုးမဖက်လုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ ယေဘူယျသတ်မှတ်ချက် တစ်ခုနဲ့ပဲ ပြောချင်တာပါ။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်ပေါ်မှာ စေတနာထားပြီး လုပ်တယ်ဆိုရင် ရပါပြီ။ လူတွေကို ကူညီနေတာ ဆိုတာမျိုးကြီးကတော့ မြင့်မြတ်လွန်းပါသဗျာ။ MLM သမားတွေရဲ့ ဝေဝေဆာဆာစကားတန်ဆာတွေကို ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်လို့ အရင်းချုပ်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ ပစ္စည်းဟာ ကောင်းလွန်းလို့ လူတွေမသုံးလိုက်ရ မရှိရလေအောင် ကူညီတဲ့အနေနဲ့ ရောင်းပေးနေတာပါ… ဈေးနှုန်းကတော့ အရည်အသွေး ကောင်းလွန်းလို့ သူများထက် များပါတယ်… ဒါပေမဲ့ လူတွေကို ကူညီတဲ့ အနေနဲ့ တကူးတက ရှင်းပြရောင်းချပေးနေတာပါ.. ဆိုတာမျိုးကို တွေ့ရမှာပါ။ တစ်မျိုးကြီးပဲလို့ မထင်ဘူးလားခင်ဗျား။
ဒီနေရာမှာ မှန်လို့သာ လူတွေလက်ခံကြတာပေါ့လို့ စောဒကတက်သူများလည်း တွေ့ဖူးပါရဲ့။ နိုင်ငံရေးနဲ့ မစိမ်းတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေအနေနဲ့ ဝါဒဖြန့်ချီရာမှာ သုံးတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အနည်းနဲ့ အများ ကြားဖူးနားဝ ရှိကြမှာပါ။ နိုင်ငံရေးမှာ ခေါင်းလှည့်တယ်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက အတော်တွင်ကျယ်ပါတယ်။ သဘောက နဂိုရှိပြီးသား အယူအဆတစ်ခု၊ ဝါဒတစ်ခုကို အစားထိုးတာ၊ ပြောင်းလဲရိုက်သွင်းတာပါ။ မဟုတ်တဲ့၊ မမှန်တဲ့ ဝါဒတစ်ခု၊ အများမနှစ်သက်တဲ့ အယူအဆတစ်ခုကိုလည်း ထပ်ကာထပ်ကာ ပြောခြင်းလို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ချဉ်းကပ်အယုံသွင်းခြင်းမျိုးကို ဝါဒဖြန့်ချီရေး ယန္တရားမှာ သုံးတတ်ပါတယ်။ ကြာလာရင် လူ ၁၀၀မှာ ၈၀ ဟာ တို့တာဝန်အရေးသုံးပါးလိုပဲ ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက် ခေါင်းထဲ အလိုလိုစွဲလာတတ်ပါတယ်။ အကြိုက်လိုက်ပြောရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ MLM ကတော့ စွဲဖို့ ဘယ်လောက်အထိ လွယ်ကူသလဲဆို အလုပ်မပျက်၊ အကိုင်မပျက်၊ ကျောင်းမပျက်ဘဲ ငွေကိုလွယ်လွယ်ရှာနိုင်တယ် ဆိုတာကို အခြေတည်ထားတာကိုး ဗျ…။ ဘယ်သူ မကြိုက်ဘဲ ရှိပါ့မလဲ… နော့။
ဆရာမင်းသိင်္ခကြုံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေး တစ်ခုလိုပါပဲ။ ဆရာမင်းသိင်္ခရဲ့ စာရေးဟန်ကလည်း သိတော်မူကြတဲ့ အတိုင်းပဲလေ။ တကယ်လိုလို အဟုတ်လိုလို ရေးတတ်ပေတာကိုး။ တစ်နေ့မှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဆရာမင်းသိင်္ခဆီ ရောက်လာပြီး ဘာပြောသလဲဆိုတော့ ကျွန်မဟာ ဆရာရေးတဲ့ မနုစာရီမင်းသမီးပါပဲ လို့ ပြောသတဲ့။ ဆရာမင်းသိင်္ခလည်း အတော်အံ့သြသွားပါသတဲ့။ မအံ့သြပဲ နေရောလားဗျာ။ မနုစာရီဆိုတာ တကယ်မှ မရှိတာပဲ။ သူကိုယ်တိုင် စိတ်ကူးယဉ်ဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်ကောင်ပဲဟာ။ အဲဒါကို စာဖတ်ရင်း….ဖတ်ရင်း တကယ်အထင်ရောက်ပြီး နောက်ဆုံး မနုစာရီကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ မူလလက်သည် ဆရာမင်းသိင်္ခဆီကိုတောင် အဲဒီလိုကြီး အတည်ပေါက်နဲ့ ရောက်လာဖူးပါတယ်တဲ့။
တစ်ဆက်တည်း ပြောရရင် ဆာအာသာကိုနင်ဒွိုင်း (Sir Arthur Conan Doyle) ရဲ့ စုံထောက်ကြီး ရှားလော့ဟုမ်းကို အပြင်မှာ တကယ်ရှိတယ်မှတ်ပြီး ရှားလော့ဟုမ်းရဲ့ အိမ်လိပ်စာကို လူတွေက လာလာမေးကြသတဲ့။ ရှားလော့ဟုမ်းဆိုတာ တကယ်မရှိပါဘူး ဆိုတာကို လက်မခံကြပဲ မကျေမနပ်တွေ ဖြစ်ကြလို့ တကယ် ရှားလော့ဟုမ်းရုံးခန်းဖွင့်၊ ရှားလော့ဟုမ်း အပြင်သွားပါတယ်ဆိုပြီး စာရေးမတစ်ယောက်နဲ့ အမှုတွေလက်ခံ မှတ်ထားခဲ့ရဖူးပါသတဲ့။
တစ်ခါ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းက ရှားလော့ဟုမ်းကို စုံထောက်ကြီးဦးစံရှားဆိုပြီး မြန်မာမှု ပြုပြန်တော့ မြန်မာပြည်ကလူတွေ ဦးစံရှားကို တကယ်ရှိတယ် မှတ်ကြပြန်တာပါပဲ။ အဲဒါကိုမှ ဆရာမင်းသိင်္ခက ဆားပုလင်းနှင်းမောင် ဆိုပြီး ရေးပြန်တော့လည်း အောင်မြင်တာပါပဲ။ တကယ်ထင်ကြတဲ့လူတွေ မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အပြောကောင်း အရေးကောင်းရင် စိတ်ကူးယဉ်ကိုတောင် တကယ်ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ယုံကြည်သူတွေအားလုံး ပညာမဲ့တွေ၊ စာမဖတ်သူတွေ မဟုတ်ကြပါ။ ယုံလွယ်သူတွေထဲမှာ ပညာတတ်ထက် ပညာမဲ့အရေအတွက်က ပိုများမယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပေမဲ့ ပညာတတ်များလည်း ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲတွေ များလှကြောင်း ပြောလိုရင်းပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ရောကိုယ်ပါ ယုံကြည်ပါဝင်ခဲ့ဖူးကြောင်း ရိုးသားစွာ ဝန်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
မှန်တယ်ထင်လို့ ပြောတာကို အပြစ်မပြောပေမဲ့ သူတစ်ပါးကို ပြန်ဖြန့်တဲ့အခါ အန္တရာယ်များပါတယ်။ အဲဒါမျိုးကို အရင်က နိုင်ငံရေးမှာရော၊ ဘာသာရေးမှာပါ အတော်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အခုတော့ ခေတ်မီလာပြီး marketing လောကမှာပါ တွေ့လာရပါပကောဗျ။
တကယ်ယုံသွားပြီဆိုရင် အယူအစွဲဆိုတာ အတော်ချွတ်ရ ခက်တာမျိုးဗျ။ အသက်အသေခံပြီးတော့ကို ဖက်တွယ်ထားတော့တာ။
MLM တွေ ဖန်တီးထားတဲ့ ဝန်းကျင်အကြောင်းလေး ပြောပါရစေဦး။ MLM အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ Celebrities တွေ၊ အရာရှိတွေ၊ လူငယ်တွေ၊ ငွေကြေးချမ်းသာသူတွေကို အထူးအာရုံစိုက် အချိန်ပေးပြီး စည်းရုံးတတ်ပါတယ်။ ဒါလည်း အဆန်းတကြယ်တော့ မဟုတ်သလို သူ့လုပ်ငန်းသဘာဝအရ လိုလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆို အဲဒီလူတွေမှာ နောက်လိုက်နောက်ပါတွေ များတတ်သလို သူတို့အသိုင်းအဝန်းထဲမှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုစီ စည်းရုံးနိုင်ကြသူတွေ မဟုတ်လား။ အထင်ကြီးလောက်တဲ့ ဝန်းကျင်မျိုး၊ ပညာတတ်တွေ၊ နာမည်ကြီးတွေ၊ ပိုက်ဆံချမ်းသာသူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပြထားရင် အားကျအထင်ကြီးကြတာ မဆန်းသလို အဲဒီသူတွေ လုပ်တဲ့အလုပ်၊ လက်ခံတဲ့အရာဆို ကောင်းတယ်ချည်း ထင်သူတွေလည်း မရှားပါဘူး။ Celebrities လို လူမျိုးတွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုဟာ သာမာန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုထက်တော့ လူအများပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးစေမှာ မလွဲပါဘူး။ တကယ်တော့ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဆိုတာ လက်ခံသူပေါ် မူတည်နေတာတွေက အများသားကလား။ ပညာတတ်တိုင်း၊ နာမည်ကြီးတိုင်း၊ ပိုက်ဆံချမ်းသာတိုင်း ဝေဖန်ပိုင်းခြား စဉ်းစားတတ်တဲ့ ဥာဏ်မျိုး ရှိလိမ့်မယ်လို့ မပြောနိုင်သလို စဉ်းစားတတ်တိုင်းလည်း အမြဲမှန်နေတာမှ မဟုတ်ဘဲလေ။ စဉ်းစဉ်းစားစား လုပ်ရင်းနဲ့ကို မှားတာတွေက အများကြီး မဟုတ်လား။ လောကကြီးမှာ အမှန်နဲ့ အမှားကို အဲဒီလောက် လွယ်လွယ်ကလေး ခွဲခြားလို့သာရရင် ဘယ်သူမှ မှားကြတော့မှာ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အများစုသော လူတွေကတော့ သူတို့နှစ်သက်တဲ့လူ၊ အားကျတဲ့လူက ကောင်းတယ် လို့ပြောရင် သိပ်စဉ်းစားမနေတော့ပဲ လက်ခံလိုက်ကြတာ များပါတယ်လို့ ပြောရင် လွန်မလားနော်။
ပိုဆိုးတာက အပြောအဟောကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်၊ လူအများရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရတဲ့ လူတစ်ယောက် အယူလွဲပြီဆိုရင် သူ့အပြော၊ သူ့အဟောကို နှစ်သက်သူတွေပါ အယူမှားဖို့ သေချာသလောက် ရှိပါတယ်။ လူရဲ့ သဘောကလည်း အပြောကောင်းတဲ့လူနဲ့ ရုပ်ချောတဲ့လူ ပြောတာချင်း ယှဉ်ရင် အပြောကောင်းတဲ့လူဘက်ကို ပါတတ်တာ သဘာဝပေကိုး။ ရုပ်ရည်ကလည်း တင့်တယ်၊ အပြောအဟောကလည်း ကောင်း ဆိုရင်တော့ ဒီလူရဲ့ စွမ်းရည်ဟာ ဆိုဖွယ်ရာ မရှိတော့ပါဘူး။
အပြောအဟောကောင်းခြင်းဟာ နောက်ဆုံးအဆင့် ဘာသာအယူဝါဒ အသစ်တစ်ခု ဖြစ်လာစေတဲ့အထိ တတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေ၊ ငွေကြေးချမ်းသာသူ ဖြစ်စေ၊ အာဏာရှိသူဖြစ်စေ အဓိက ကတော့ အယူအဆမှန်ဖို့၊ စိတ်ကောင်းရှိဖို့ အရေးကြီးတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ရှင်ဇနက္ကာဘိဝံသဆရာတော်ဘုရားကြီးက စိတ်ကောင်းရှိဖို့ ပထမလို့ ဟောတော်မူတာပါ။
စီးပွားရေး လုပ်ရာမှာ ဒါမှမဟုတ် ပစ္စည်းတစ်ခု ရောင်းချရမှာ သာမာန်အားဖြင့် ကြိုက်ရောင်း ကြိုက်ဝယ်ပါပဲ။ ကြိုက်အောင် ပြောမယ်၊ ရောင်းမယ်…. ကြိုက်ရင်ဝယ်မယ်… မကြိုက်ရင် မဝယ်ဘူးပေါ့။ ဒါ ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ MLM player တွေရဲ့ sensitivity ကတော့ အရမ်းကို ထိလွယ်ရှလွယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ သာမာန်အရောင်းသမားတွေလို မဟုတ်ဘဲ သူတို့ စနစ်ကို တစ်ခုခု ပြောရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံ တုန့်ပြန်တတ်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေလိုပဲ MLM အချင်းချင်းမှာတောင် တခြား MLM တွေထက် သူတို့စနစ်က ဘယ်လိုသာကြောင်း၊ သူတို့ကို ဘယ်လောက်ထိ လေ့ကျင့်ပေးထားတာဖြစ်ကြောင်း...... စသဖြင့်... စသဖြင့် စုံနေအောင် ကြားရပါမယ်။ အယူဝါဒတစ်ခု၊ ယုံကြည်မှု တစ်ခုလို ဖြစ်အောင် ရိုက်ထည့်တဲ့ နည်းတွေကို MLM Founder တွေက သုံးပါတယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင် ပြောစရာတွေ အများကြီး ရှိသေးပေမဲ့ ဈေးကွက်ရှာပုံ ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီလောက်နဲ့ ရပ်ပါမယ်။ တွေ့သရွေ့သာ ရေးရရင် ဆုံးမှာကို မဟုတ်တော့ပါ။
မရပ်ခင် နောက်ဆုံးတစ်ခုလေး အရစ်ရှည်ချင်တာက MLM သမားတွေကို သူတို့ product ရဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်က ဘာလဲလို့ မေးကြည့်ပါ။ လောကကြီးမှာ ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာ ဘယ်ဟာမှ မရှိကြောင်းပါခင်ဗျား။ သိပ်ပြီး ချောမွေ့ပြေပြစ် အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတဲ့ အရာတိုင်းဟာ မသင်္ကာစရာ ကောင်းကြောင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘဝပေးအသိတစ်ခုကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
ပြောရင်း ရောင်းရင်း Marketing (MLM) အပိုင်း (၁)
ပြောရင်းရောင်းရင်း Marketing MLM (အပိုင်း-၄)
ပြောရင်းရောင်းရင်း Marketing MLM (အပိုင်း-၅)
ပြောရင်းရောင်းရင်း Marketing MLM (အပိုင်း-၆)
ပြောရင်းရောင်းရင်း Marketing MLM (အပိုင်း-၇)
ပြောရင်းရောင်းရင်း Marketing MLM (နောက်ဆက်တွဲ နိဂုံး)